Akụkọ - Foto ndị otu nke ụfọdụ ndị ọrụ
Otu foto nke ụfọdụ ndị ọrụ
Onye isi njikwa Wu Yunfu kwuru okwu nnabata na ogbako a. Ọ nabatara ndị ọbịa niile nke ọma wee kelee ha maka nkwado ha ogologo oge maka mmepe Lujury, wee webata ọnọdụ mmepe nke ugbu a na atụmatụ nke Lujury n'ọdịnihu n'ụzọ zuru ezu na nke ọma.
Onye isi njikwa Wu Yunfu kwuru okwu
Wu Yunfu kwuru, sị: Ebumnuche ijide ọgbakọ nkwukọrịta nke atọ bụ ibupụta echiche anyị, gee ntị na ntụnye gị, nweta nkwado gị, tinye ihe anyị chọrọ, mee ka mmetụta nke otu abụọ sikwuo ike iji nweta ọnọdụ mmeri.
Ọbịa na nzukọ
Wu Yunfu rụtụrụ aka na kemgbe e guzobere ya, Lujury ekwenyela na "ịdị mma bụ ntọala nke ọrụ" kemgbe afọ iri na asatọ, ma nwee ezigbo ọbụbụenyi na ndị mmekọ ya. Site na mbọ na nkwado nke ndị na-ebubata ya, amatala ya. ọtụtụ ụdị ụgbọ ala eletriki ama, dịka AIMA, LIMA, LUYUAN na SLANE Ka ọ dị ugbu a, Lujury ewepụtala okwu nke "iji obi pụta ihe n'ọdịnihu". Anyị dị njikere ịga n'ihu na-arụkọ ọrụ ọnụ na ndị mmekọ anyị ịchọ ọdịnihu. oge ọhụụ na njem ọhụụ, anyị ga-ekepụta ọmarịcha ọhụụ mgbe niile.
Osote onye isi njikwa Zhang Juqin bịara nzukọ ahụ
N'ihe banyere otu esi amata uru ndị ọzọ na mmeri na mmeri, Wu Yunfu kwuru na ekwesịrị ịnye ndị na-eweta ngwaahịa n'ọtụtụ elele.
Nke mbụ, oge nnyefe: mbata nke ihe bụ ihe na-egosi iguzosi ike n'ezi ihe nke ụlọ ọrụ. Igodo nke mmeri-mmeri bụ iguzosi ike n'ezi ihe.
Nke abuo, ogo: Mee ka njikwa nke ihe ochie mepụta ma mekwaa nloghachi ya.
Nke atọ, ọrụ: Meziwanye ogo ọrụ dabere na eziokwu.
Nke anọ, ọhụrụ ngwaahịa mmepe: Scientific na nkà na ụzụ ọhụrụ bụ na-akwọ ụgbọala nke enterprise mmepe, na R&D kwesịrị ibe imekọ ihe ọnụ, na ọhụrụ ga-akpali ọdịdị nke a mmeri-mmeri ọnọdụ.
Onye nduzi teknụzụ Peng Hao na-ekwu okwu
Peng Hao kọwapụtara ogo teknụzụ site na isi atọ ndị a, ya bụ ọrụ, ihe ọhụrụ na ogo.
Nke mbụ, ọrụ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ ọ bụla pụtara ìhè na-ele ọrụ anya dị ka "usoro ndụ" nke ndụ ụlọ ọrụ. Lọ ọrụ ọ bụla na-eleghara ọrụ anya ma na-ada afọ ojuju maka mkpa ndị ahịa ga-ajụ.
Nke abuo, ihe ohuru. Newbọchị ọhụrụ na-eme ụbọchị ọhụrụ. Iji hụ na mmepe na arụmọrụ na-aga n'ihu, ụlọ ọrụ ga-agbanwe onwe ha oge niile.
Nke atọ, mma. Maka ezi mmepe, ụlọ ọrụ ga-ekwusi ike mkpa nke ngwaahịa dị mma, nke bụ ndụ ụlọ ọrụ. Na-enweghị ntụkwasị obi ndị ahịa na njirimara ngwaahịa, ndụ ụlọ ọrụ ga-ebelata.
Wu Yuqun, Mịnịsta nke Ihe Njikwa Ihe kwuru.
Nzukọ a setịpụrụ ezigbo ikpo okwu maka nkwukọrịta miri emi n'etiti Lujury na ndị na-ebubata ya, wee rute ebumnuche a na-atụ anya nke ime nkwekọrịta na njikọta miri emi. Mgbe emechara nzukọ ahụ, akụkụ niile kwuru na ha ga-eji ohere a mee ka nkwukọrịta sikwuo ike, kwalite echiche nke imekọ ihe ọnụ, wee rụọ ọrụ ọnụ iji nweta mmeri ọ bụla n'ọdịnihu.